एमालेद्वारा प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध « हातमा खबर-जहाँ तपाइँ, त्यहीं खबर
एमालेद्वारा प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध
प्रकाशित मिति : २०७८, २३ भाद्र बुधबार १६:२७
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध गरेको छ । बुधबार बैठक सुरु हुनासाथ एमलेले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नेकपा एमाले फुटाउन सहयोगी भूमिका खेलेको भन्दै सभामुखसँग कारण माग गर्दै बैठक अवरुद्ध गरेको हो ।
बैठकको सुरुमै एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले एमालेले १४ जना सांसदलाई कारबाही गरेको पत्र संसद सचिवालयमा पठाउँदा सभामुखले कारबाही गरेको सूचना सभामुखले नटाँसेको बताए ।
उनले संविधान, नियम, नीति, विधि उल्लंघन गरेर नेकपा एमालेलाई विभाजन गरिएको भन्दै सभामुखबाट जवाफ माग गरे । सभामुखबाट यथोचित जवाफ नआएसम्म संसद अघि बढ्न नदिने पार्टीको निर्णय भएको उनले जानकारी गराए ।
उनले भने, ‘सभामुख महोदय त्यो आशनमा बसिरहँदा सभामुख महोदयको मर्यादा भनेको सबै दलहरुप्रति सम्मानपूर्ण र समानतापूर्ण व्यवहार हो कि होइन सभामुख महोदय ? तर नेकपा एमाले अन्य कुनै धर्तीबाट आएको राजनीतिक पार्टी त होइन होला ? तपाइले हामीले कारबाही गरेका सांसदहरुको हकमा किन सूचना निकाल्नुभएन ? पटक पटक हामीले फोन गर्यौँ । हामीले भेटेर भनेका छौँ । तर हाम्रो पार्टी नियोजित रुपमा टुक्राइसकेपछि बल्लबल्ल १३ दिनपछि चाहिँ केही गर्नु नपर्ने भन्ने हिसाबले सभामुख ज्यूले यो काम गर्नुभएको छ । हाम्रो बीचमा एउटा अनुत्तरित प्रश्न छ त्यो के भने सम्माननीय सभामुख महोदय तपाईले नेकपा(एमाले)ले कारबाही गरेका आफ्ना सांसदहरुको हकमा उनीहरुलाई बचाउन र नेकपा(एमाले) टुक्राउन किन एउटा सहयोगीको भुमिका निर्वाह गर्नुभयो ? किन सारथीको भुमिका निर्वाह गर्नुभयो ? निर्वाचन आयोगबाट हामी जवाफ खोजिरहेका छौँ । यसको यथोचित जवाफ नपाउञ्जेल यो संसद अघि बढ्न नदिने नेकपा(एमाले)को निर्णय म जानकारी गराउन चाहान्छु ।’
त्यसलगत्तै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले जवाफ दिदैँ आफूले प्रचलित कानूनको प्रावधानको आधारमा निर्णय लिएको बताए । उनले सम्मानित सवोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै संसदमा छलफल गर्न नमिल्ने पनि बताए ।
उनले प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ को नियम २१ को खण्ड ख, ग र घ का प्रावधानबारे ध्यान दिन आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले वेल घेरेर संसदको संर्वोच्चता कायम गर, संविधान सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ को खण्ड ख र ग को ध्यानाकर्षण गराएको बताएपनि नाराबाजी नरोकिएपछि सभामुख सापकोटाले १५ मिनेटको लागि बैठक स्थागित गरिएको बताए ।